असारसम्म साढे ५ लाख अक्सिजन सिलिन्डर आवश्यक पर्ने – Nepal Press
असारसम्म साढे ५ लाख अक्सिजन सिलिन्डर आवश्यक पर्ने
२०७८ जेठ ५ गते १४:०९
काठमाडौं । सरकारले आगामी असारसम्म कोरोना महामारीबाट संक्रमित भएका बिरामीका लागि पौने ४ अर्ब लिटर अक्सिजन अर्थात साढे ५ लाख सिलिण्डर खपत हुने अुनमान गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालये एक साता अघि मात्र जारी गरेको ‘मेडिकल अक्सिजन प्रयोग तथा आवश्यकता निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८’ अनुसार यस्तो अनुमान गरिएको हो ।
मापदण्डमा अनुमान असार महिनासम्ममा ३ प्रकारका गरेर अक्सिजन जरुरी पर्ने ६० हजार ३५ जना बिरामीका लागि अर्ब ८५ करोड ३२ लाख ९७ हजार ६ सय १७ लिटर अर्थात ४६ लिटर क्षमताका ५ लाख ६६ हजार ६ सय ६१ अक्सिजन सिलिण्डर खपत हुने अनुमान गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालका सहायक प्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।
उनका अनुसार जेठ महिनामा ३ हजार २३ जना आइसीयू अर्थात भेन्टिलेटरमा पुगेका बिरामीका लागि २९ करोड ७० लाख ६३ हजार ९४ लिटर अर्थात ४३ हजार ६ सय ८६ अक्सिजन सिलिण्डर खपत हुनेछ । ७ हजार ५३ एचडीयू जटिल अवस्थामा पुगेका विरामीका लागि ५९ करोड ६३ हजार ७ सय ८६ लिटर अर्थात ८६ हजार ७ सय ७४ अक्सिजन सिलिण्डर खपत हुनेछ ।
र १० हजार ७५ जना साधारण अक्सिजन बेडमा पुगेका बिरामीलाई ४० करोड ६२ लाख ४० हजार १ सय २८ अर्थात ५९ हजार ७ सय ४१ सिलिण्डर खपत हुने अनुमान छ । यसरी जेठ महिनामा ३ प्रकारका गरेर २० हजार १ सय ५१ जना बिरामीलाई गरेर जम्मा १ अर्ब २९ करोड ३३ लाख ६७ हजार ८ लिटर अर्थात १ लाख ९० हजार २ सय १ अक्सिजन सिलिखण्ड खपत हुनेछ ।
यस्तै असार महिनामा ३ हजार ६ सय ९८ जना आइसीयू अर्थात भेन्टिलेटरमा पुगेका बिरामीका लागि ३६ करोड ३४ लाख १९ हजार ७ सय ८४ लिटर अर्थात ५३ हजार ४ सय ५४ अक्सिजन सिलिण्डर खपत हुनेछ । ८ हजार ६ सय २८ एचडीयू जटिल अवस्थामा पुगेका विरामीका लागि ७२ करोड १८ लाख ६९ हजार ७ सय २५ लिटर अर्थात १ लाख ६ हजार १ सय ५७ अक्सिजन सिलिण्डर खपत हुनेछ ।
र १२ हजार ३ सय २६ जना साधारण अक्सिजन बेडमा पुगेका बिरामीलाई ४९ करोड ६९ लाख ८४ हजार ३ सय २० अर्थात ७३ हजार ८६ सिलिण्डर खपत हुने अनुमान छ । यसरी असार महिनामा ३ प्रकारका गरेर २४ हजार ६ सय ५२ जना बिरामीलाई गरेर जम्मा १ अर्ब ५८ करोड २२ लाख ७३ हजार ८ सय २९ लिटर अर्थात २ लाख ३२ हजार ६ सय ८७ अक्सिजन सिलिण्डर खपत हुनेछ ।
सरकारको अुनमान भन्दा बैशाखमा ७४ प्रतिशत बढी संक्रमित थपिए
मापदण्डमा अनुमान गरिए अनुसार बैशाख महिनामा ७६ हजार १ सय ६० नयाँ संक्रमित थपिने अनुमान गरिएको थियो । जसमध्ये ८० प्रतिशत अर्थात ६० हजार ९ सय २८ जना सामान्य बिरामी, १० प्रतिशत अर्थात ७ हजार ६ सय १६ अस्पतालमा अक्सिजन सहित, ७ प्रतिशत अर्थात ५ हजार ३ सय ३१ जना गम्भिर एचडीयू र गम्भिर आइसीयु तथा भेन्टिलेटरमा ३ प्रतिशत अर्थात २ हजार २ सय ८५ जना पुग्ने अनुमान थियो ।
तर संक्रमण दर भने एक महिना अघि एक दिनमा ७९ जना मात्र थपिएका थिए । अहिले दैनीक रुपमा ८ देखि ९ हजारका दरले संक्रमित थपिरहेका छन् । यसरी हेर्दा बैशाख महिनामा १ लाख ९ हजार ७ सय ४० जना संक्रमित थपिएका छन् । सरकारले अनुमान गरेको भन्दा ७४ प्रतिशतले बढी अर्थात ५६ हजार ५ सय संक्रमित बढी थपिएका मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले बताए ।
तर आईसीयू तथा भेन्टिलेटरमा पुग्ने विरामीको संख्या भने सरकारले अनुमान गरेजस्तो बैशाखमा पुगेको छैन् । ठिक एक महिना अघिको तथ्यांक हेर्दा चैत १ गते एक जना पनि आइसीयू र भेन्टिलेटरमा बिरामी थिएन । तर एक महिनाको अवधिमा करिव २ हजार संक्रमित आईसीयू तथा भेन्टिलेटरमा पुगेका छन् ।
जसमा ७ वटै प्रदेशमा गरेर १ हजार ३ सय ३१ जना आईसीयूमा छन् भने ३ सय ७० जना भेन्टिलेरटमा छन् । यस्तै काठमाडौं उपत्यकामा १ सय ८० जना आईसीयूमा छन् भने १ सय १ जना भेन्टिलेटरमा छन्् । सात वटै प्रदेश र काठमाडौं उपत्यकाको तथ्यांकलाई जोड्दा १ हजार ५ सय ११ जना आइसीयूमा छन् भने ४ सय ७१ जना आईसीयूमा छन् ।
मापदण्ड अनुसार सरकारले जेठ महिनामा १ लाख ७ सय ५४ जना नयाँ संक्रमित थपिने अनुमान गरेको छ । जसमध्ये ८० हजार ६ सय ३ सामान्य, १० हजार ७५ जना अस्पतालमा अक्सिजन सहित, ७ हजार ५३ जना गम्भिर एचडीयूमा र ३ हजार २३ जना गम्भिर आइसीयू तथा भेन्टिलेटरमा पुग्नेछन् । यस्तै असार महिनामा १ लाख २३ हजार २ सय ६० जना नयाँ संक्रमित थपिने छन् । जसमा ९८ जार ६ सय ८ सामान्य, १२ हजार ३ सय २६ जना अस्पतालमा अक्सिजनसहित, ८ हजार ६ सइ २८ जना गम्भिर एचडीयूमा र ३ हजार ६ सय ९८ जना गम्भिर आइसीयू तथा भेन्टिलेरमा पुग्नेछन् ।
तर सरकारले बैशाख महिनामा अनुमान गरेको संक्रमणदर भन्दा ७४ प्रतिशतले बढी थपिएकाले जेठ महिनामा अनुमान गरेको संख्या १ लाख ७ हजार ७४ मा ८३ हजार ८ सय ९३ जना बढी थपिएर १ लाख ९१ हजार पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । भलै अहिले देशव्यापी निषेधाज्ञा जारी भएकाले यसरी नबढ्न पनि संक्छ । तर अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भएको २० दिन पुरा भइसक्दा पनि कोरोना संक्रमणदर घट्न सकेको छैन् ।
मापदण्ड अनुसार आइसीयू र भेन्टिलेटरमा राखी उपचार गर्नुपर्ने गम्भीर अवस्थाका बिरामीका लागि १० लिटर प्रति मिनेटका दरले हरेक दिन औसतमा १४ हजार लिटर अक्सिजन खपत हुने अनुमान गरिएको छ । एजडीयुमा राखी उपचार गर्नुपर्ने गम्भिर बिरामीका लागि ८ लिटर प्रति मिनेटका दरले प्रति दिन औसतमा १२ हजार लिटर अक्सिजन खपत हुनेछ । अस्पतालमा अक्सिजनसहित उपचार गर्नुपर्ने बिरामीका लागि ४ लिटर प्रति मिनेटका दरले प्रति दिन औसतमा ६ हजार लिटर अक्सिजन खपत हुने अनुमान छ ।
यसरी हेर्दा १० जना बिरामीलाई आईसीयूमा राखेर उपचार गर्दा प्रतिदिन १ लाख ४० हजार ४ सय लिटर र २१ सिलिण्डर आवश्यक पर्दछ । ५० जना बिरामीलाई एचडीयूमा राखेर उपचार गर्दा प्रति दिन ५ लाख ९७ हजार ६ सय लिटर र ८८ सिलिण्डर आवश्यक पर्दछ । १ सय जना सामान्य विरामीलाइृ अक्सिजन दिएर उपचार गर्दा प्रतिदिन ५ लाख ७६ हजार लिटर र ८५ सिलिण्डर आवश्यक पर्दछ ।
कोभिड–१९ को उपचारका लागि तोकिएका अस्पतालले बेड संख्याका आधारमा कम्तीमा ७ दिनका लागि मेडिकल अक्सिजन मौज्दात राख्नु पर्नेछ । मेडिकल अक्सिजनको प्रयोग दर्तावाल चिकित्सकको सिफारिस र स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा मात्र गर्नुपर्नेछ ।
कोभिड–१९ महामारीमा संक्रमितको उपचार व्यवस्थापनमा अक्सिजनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेकाले यसको व्यापक प्रयोग भइरहेको अवस्थामा अक्सिजनको प्रयोग तथा आवश्यकतालाई ध्यान दिदै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ‘मेडिकल अक्सिजन प्रयोग तथा आवश्यकता निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८’ जारी गरेको हो । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ६४ ले लिएको अधिकार प्रयोग गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीण निर्णयबाट बैशाख २३ गते स्वीकृत गरेसँगै लागू भइसकेको छ ।
प्रकाशित: २०७८ जेठ ५ गते १४:०९